Wasiir ku xigeenka Wasaarada Amniga Dowladda Federaalka Soomaliya Cabdinasir Siciid Muuse [Bahaay]. ayaa lala egtay Garigiisa Qaraxa Caawa ka dhacay Exgoyska Taleex.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, 3 kalena way ku dhaawacmeen qarax culus, oo caawa fiidkii ka dhacay magaaladda Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya.
Goobjooge la hadlay KEYDMEDIA ONLINE, ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay bam lagu qariyay bac oo la dhigay afaafka dhismo cusub oo laga dhisayo Isgoyska Taleex, waxaana lala eegtay Gaari uu leeyahay Wasiir ku xigeenka Amniga DF Abdinaasir Saciid Muuse (Bahaay).
Lama oga inuu Wasiirka la socday Gaariga xiliga qaraxa, balse wararka ayaa sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ahaayeen shacab wadada marayay, waxaana goobta xiray Ciidamada amniga oo mudo daqiiqado ah hakad geliyay gaadiidka.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka Caawa ka dhacay Muqdisho, oo kusoo beegmaya xili mudooyinkii dambe la kordhiyay Ciidamada jidadka baabuurta ku baara, kuwaasoo la geliyay feejignaan ku aadan qaraxyada.
0 Comments Topics: al shabaab muqdisho qarax soomaaliya